स्वास्थ्यशैली Archives - Page 52 of 54 - Recent Nepal News
काठमाडौं- कहिलेकाँही कुनै घटना परिस्थिति तथा वाध्यता पछि मानिसको मन भौतारिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मन एउटै कुरामा घुमाई रहनुहुँदैन । बरु मन परिवर्तन गर्नुपर्छ, कुनै नराम्रो अनुभव मनमा लिईरहँदा हाम्रो मष्तिष्कमा समेत असर पु¥याउँछ । शरीर तात्छ, मुटुको धडकन बढ्छ र छटपटि हुन्छ । त्यसैले अनावश्यक कुरामा एकोहोरो गहिरो सोचाई नगर्ने । १.अर्काको उपलब्धिलाई सजिलै ग्रहण गर्ने र खुसी हुने । हामी हाम्रो प्रगति...
अनारको जुसले सेक्स क्षमता बढाउने
यदि तपाईंको यौन साथी सेक्सको नाम सुन्नासाथ टाढा भाग्छन् या सेक्सप्रति रुची राख्दैनन् भने चिन्ता नलिनुस्, एक गिलास अनारको जुस पिउन दिनुहोस् । एक अध्ययनबाट अनारको जुसले सेक्स क्षमता बढाउने पुष्टि भएको छ । अध्ययनका अनुसार कम्तीमा १५ दिन अनारको जुस पिउनाले त्यसको असर देखिनेछ । एडिनबर्गको क्वीन मार्गरेट विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले अध्ययनमा सामेल गराएका महिला तथा पुरुषलाई १५ दिनसम्म दैनिक एक गिला...
दाँत दुखाईबाट बच्ने ५ उपाय
१. नुन–पानीले कुल्ला गर्ने एक कप मन तातो पानीमा एक चम्चा नुन मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको निको गर्छ । नुन–पानीले मुखमा भएका फोहर खानेकुरा हटाएर सफा गरिदिनुका साथै दुखाई निको गर्छ । २. चिसो प्याक प्रयोग गर्ने दुखेको दाँतमाथि चिसो कटनको टुक्रा राखेर दुखाईबाट क्षणिक रुपमा बँच्न सकिन्छ । ३.ल्वाङको तेल राख्ने दाँत दुख्दा ल्वाङको तेल राखेर घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । तेल नभएको अवस्थामा ल्...
गोरखामा दुईहजार विद्यार्थीको मुटु परीक्षण
गोरखा, भदौ ३१ – गोरखाका विभिन्न सरकारी विद्यालयमा पढ्दै आएका विद्यार्थीको बिहीबार निःशुल्क मुटु परीक्षण गरिएको छ । नेपाल हर्ट फाउन्डेसन गोरखाले दशकिलोस्थित महेन्द्र मावि र आहालेस्थित सरस्वती माविका दुई हजारजना विद्यार्थीको मुटुको परीक्षण गरेको हो । मुटु परीक्षणका क्रममा दुईजना विद्यार्थीको मुटुमा समस्या देखिएको छ । उनीहरुको उपचारका लागि तीन लाख रुपैयाँ लाग्ने र फाउन्डेसनले निःशुल्क उपचार गरिदिने ...
गर्मीमा जुस र फलफूल
भाद्र ३०, २०७३ गर्मी मौसमको आगमनस“गै बजारमा रहेका जुस तथा फलफूल पसलहरूमा भीड बढ्छ । यद्यपि जुसको अनुपातमा फलफूल खानु नै उत्तम हुन्छ । जुस बनाउ“दा फलफूलको बोक्रा र रेसामा रहेका कयौं महत्वपूर्ण पोषणतत्व नष्ट हुनपुग्छन् । जसका कारण शरीरमा पोषणतत्व पुग्न पाउदैन । उदाहरणका लागि सुन्तलाको जुस बनाउ“दा त्यसमा पानी मिसाइन्छ जसले गर्दा फलफूलमा पाइने भिटामिन सी तथा अन्य पोषकतत्व पनि हराउछ । बोक्राको...
कपाल झरे यी ३ उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाडौं, भदौ २८ –हल्काफुल्का कपाल झर्नु ठूलो समस्या होइन । आयु पूरा भएका कपाल झर्नु र नयाा पलाउनु प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो । तर, हातले कपाल समातेर तान्दा औालाका बीच भागमा गुजुल्टै आउनु, राति सुतेर भोलिपल्ट बिहान हेर्दा शिरानीभर कपाल झर्नु सामान्य प्रक्रिया होइन । यसरी कपाल झरे के गर्ने रु हेयर डिजाइनर लक्ष्मी ठाकुरले केही टिप्स दिएका छिन् स् १. कपाल अस्वाभाविक रूपमा झरिरहेको छ भने हेलचेक्...
वैशाखयता १८९ जनामा स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण
रत्ननगर (चितवन) भदौ २४ - चितवनमा ‘स्क्रब टाइफस’ रोगको निःशुल्क परीक्षण सुरु भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट चितवनको भरतपुर अस्पतालका लागि २०० वटा किट उपलब्ध भएकाले परीक्षण निःशुल्क गर्न थालिएको हो । “हामीले भरतपुर अस्पताललाई किट उपलब्ध गराइसकेका छौँ, जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी नरहरि शर्माले भन्नुभयो, अब सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण हुन्छ ।” ...
युरिक एसिड कम गर्ने उपाय
आश्विन २२, २०७२ आधुनिक जीवनशैली एवं खानपानले धेरैजना युरिक एसिडको समस्याले पीडित छन् । दीर्घकालीन रोगका रूपमा लिइने युरिक एसिडबाट जोगिन निम्न उपाय अपनाउनुपर्छ। –सर्वप्रथम शरीरको तौल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बढी तौल भएको शरीरमा युरिक एसिड थुप्रिएर बस्छ र रगतमा प्रसार हुन्छ। –मासुजन्य खाद्यपदार्थमा प्युरिन हुन्छ, जसको सेवनले युरिक एसिड बढाउँछ । खासगरी रातो मासुको उपभोग कम गर्नुपर्छ । कलेजो...
होसियार ! यसकारण वर्षमा २ पटक आउँछ डिभोर्सको मौसम
जाडो, गर्मी, वर्षा, हिउँद जस्तै दाम्पत्य जिवनमा आउने उतारचढाव र सम्बन्ध विच्छेदको पनि मौसम हुन्छ । अमेरिकी शोधकर्ताहरुका अनुसार एक वर्षमा दुइ पटक डिभोर्सको मौसम आउँदछ । वाशिंटन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रकी सहप्राध्यापक जूली बि्रन तथा विद्यावारिधीका शोधार्थी ब्रायन सेराफनीले गरेको अध्ययन अनुसार वर्षमा २ याम सम्बन्ध विच्छेदको लागि निकै उर्वर समय हुन् । सम्बन्ध विच्छेदको पहिलो मौसम मार्च महिनामा ...
यस्ता व्यक्तिको बिग्रिन्छ कलेजो
- प्रा.डा. अनिल मिश्र, कलेजोरोग विशेषज्ञ कलेजो हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण र संवेदनशील अंग हो । कलेजो बिग्रिएमा शारीरिक प्रक्रियामा जटिलता आउँछ । कलेजोले आफ्नो भूमिका छोड्दै गएपछि हामीले खाएको पोषण शरीरमा लाग्न पाउँदैन । बिग्रिदै गरेको कलेजोको वेलैमा उपचार गरे काममा ल्याउन सकिन्छ । तर, अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि कुनै सीप लाग्दैन । यतिखेर एउटै उपाय हुन्छ, ट्रान्सप्लान्ट । त्यसैले कलेजोमाथि खेलाँची...